Famakiana bantsilana ny raharaham-pirenena: mivonona ny hanenjana ireo vondron’ny mpanohitra - ewa.mg
News - Famakiana bantsilana ny raharaham-pirenena: mivonona ny hanenjana ireo vondron’ny mpanohitra
Fanambarana faharoa. “Nisy
fahadisoana ny voka-pifidianana noho ny “doublons”. Tsy ahitana
taratra ny fahaleovantenan’ny Ceni izany… Ho avy ny fotoana
hamakiana bantsilana sy hampahafantarana ampahibemaso ny vahoaka ny
tsy mety ataon’izao fitondrana izao”, hoy ny ampahan’ny
fanambaran’ireo vondron’ny olom-boafidy, ahitana ben’ny Tanàna sy
mpanolotsaina ary ny maro hafa, teny Andrainarivo, omaly.
Anisan’izany ny fanararaotam-pahefana sy ny fanitsakitsahana ny
demokrasia. Nohitsin’izy ireo fa tsy hijanona intsony ny
hetsika ataon’izy ireo raha tsy tanteraka ny hetahetan’ny Malagasy.
Nentanin’izy ireo koa ireo olom-boafidy hafa tokony ho mpifidy ireo
loholona mba hanara-dia azy ireo amin’ny tsy handraisany anjara
amin’ny fifidianana. Anisan’ny iantefan’izany ireo voafidy amin’ny
antoko politika sy ny tsy miankina.
L’article Famakiana bantsilana ny raharaham-pirenena: mivonona ny hanenjana ireo vondron’ny mpanohitra a été récupéré chez Newsmada.
Covid 19-Afrika: nihoaran’i Egypta amin’ny isan’ny marary i Afrika Atsimo
Mihazakazaka ny fivoaran’ny tsimokaretina Coronavirus ao Egypta. Hatramin’ny omaly, nihoarany i Afrika Atsimo amin’ny isan’ny marary, ka nahatapetraka azy eo amin’ny laharana voalohany eto Afrika. Tafakatra 3 333 ny isan’ny tranga ao Egypta. Miisa 250 kosa ny maty ary 821 ireo sitrana.Tsy mifanalavitra amin-dry zareo Egyptianina i Afrika Atsimo satria miisa 3 300 ny marary any an-toerana. Mbola vitsy kosa anefa ny maty. Miisa 58 izany ary 1 055 ireo efa sitrana. Eo amin’ny laharana fahatelo i Maraoka. Manana marary 3 186, miisa 144 ny maty ary 359 ny isan’ny sitrana any amin’izy ireo.Voafehy kokoa ny coronavirus aty Afrika Manaraka azy ao i Alzeria anisan’ny firenena afrikanina be maty indrindra, hatreto. Mitotaly 384 raha toa ka 2 718 ny isan’ny marary ary 1099 ny sitrana. Any amin’ny laharana fahadimy i Kameronina, manana marary miisa 1 163, raha toa ka 43 ny maty ary 329 kosa ny sitrana. Raha oharina amin’ny kontinanta hafa, azo lazaina ho voafehy ihany ny tsimokaretina Coronavirus eto Afrika. Efa samy manana ny fanafody hanasitranana azy rahateo ny firenena tsirairay, saingy hita ho mahomby kokoa ny fanafody eto Afrika. Toy ny any Sénégal, mampiasa ny Chloroquine hitsaboana ity areti-mandoza ity.Mi.Raz L’article Covid 19-Afrika: nihoaran’i Egypta amin’ny isan’ny marary i Afrika Atsimo a été récupéré chez Newsmada.
Tena ao anatin’ny fahasarotana tanteraka ny ankamaroan’ireo klioba amin’ny taranja baolina kitra eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Tsy vitsy ireo misedra olana ara-bola noho ny fialan’ireo orinasa manohana sy manampy azy ireo. Betsaka ihany koa ireo mpilalao sy mpanazatra no tsy manan-kohanina intsony, ma­melona vady aman-janaka, amin’ity taranja ity ny ankabetsahany, . Miantso vonjy ireo mpilalao sy ny mpanazatra manoloana ny zava-misy ankehitriny. Mitodika any amin’ny filoham-pirenena, ny mason’izy ireo amin’izao krizy ara-tsosialy mianjady amin’izy ireo izao mba hijery izay azo atao, hiatrehany ny fihiboana fa mahatsiaro mijaly ry zalahy. Tsy voaloan’ireo ekipa intsony ny karaman’ireo mpilalao ka mizotra any amin’ny lalan’ny faharavana ny klioba. Eny fa na eo aza ireo mbola hiatrika ny fifaninanam-pirenena sy ny fiadiana ny amboaran’i Madagasi­kara, ho an’ity taom-pilalaovana 2020, ity. Nisy ireo filoha mpitantana ekipa nilaza fa natsahatra mihitsy aloha ny klioba, izay tsy mbola voafaritra ny fotoana hamerenana azy amin’ny laoniny. Vokatr’izany, misy ireo hiala an-daharana ka tsy hanohy intsony ny fiadiana ny ho tompondakam-pirenena, na hiverina aza ny fifaninanana, atsy ho atsy.TompondakaL’article Kitra sy ny “coronavirus” : Miantso vonjy amin’ny filoha Rajoelina ireo mpilalao a été récupéré chez Newsmada.